Apocalypse Kamva - Apocalypse Kamva
Kwiicomics ze-superhero, ubukho bomntu ngamnye buchazwa ngokukwazi kwakhe ukugcina okanye ukusongela ihlabathi. Umbhali uJonathan Hickman ukona kwakhe xa enikwe inkululeko yokutshabalalisa ngendlela yonke into. Ukubaleka kwakhe Abaphindezeli kwaye Abaphindezeli abatsha ifikelele kuvuthondaba kulo nyaka uphelileyo ngomsitho wecrossover Iimfazwe ezifihlakeleyo , engazange ibekho ngaphantsi kokutshatyalaliswa ngokupheleleyo kwayo yonke iNdalo eMangalisayo.
Ekuphela komqobo ukonwabela ukubulawa kwabantu kukaHickman ngumonde.
Xa ufunda EMpuma Ntshona , kuyinto eqhelekileyo ukuziva ubhidekile. Malunga nento eyenzekayo, ngubani owenza ntoni, kwaye ngoba. Ngandlel’ ithile, oko akuyonto imbi. Lo ngumxholo weHickman comics.
Ndibhideka nokuba ndichwetheza isishwankathelo esirhabaxa:
EMpuma Ntshona ibonisa ikamva ledystopian esekwe kwixesha elahlukileyo kancinane. Emva kokuba iMfazwe yamakhaya iphele ngo-1908, ngenxa yoqhankqalazo lwe-meteor, iMelika yaqhekeka yaba yimimandla esixhenxe ezimeleyo: iArmistice, iManyano (ekuMntla-mpuma), i-Confederacy (eMazantsi), iSizwe esingenasiphelo (eMidwest kunye namaThafa amakhulu), uBukumkani. (eNew Orleans), iRiphabhlikhi yaseTexas, kunye ne-PRA yaseMao (eWest Coast).
Kweli hlabathi, abakhweli bamahashe abane be-apocalypse baphinda bazalwa bengabantwana bangaphambi kokuzalwa, okuphawula ukuqala kwamaxesha okuphela. Ngaphandle kokuba bathathu kuphela abakhweli bamahashe-iMfazwe, uloyiso kunye nendlala. Ukufa kusabaleka ekwimo yakhe yabantu abadala.
Ukufa kuthandana noXiaoling, enye yeentombi zika-Mao III, anonyana naye.
I-naomi ibukela iincopho zamawele
Umprofeti uEzra ubona kwangaphambili ukuba uKufa kunye nonyana kaXiaoling baya kukhula babe lirhamncwa, eliya kuthi ngenye imini lizise isiphelo sehlabathi. Imfazwe, Uloyiso, kunye neNdlala zithatha umdla kusana, ziluqweqwedise, kwaye ziluqeqeshele ukuba lirhamncwa.
Oku kwenza ukufa kube buhlungu ngokuqondakalayo. Ekunye namahlakani akhe angaqondakaliyo aseMelika uWolf kunye noCrow, wazimisela ukuziphindezela. Oku kukhokelela ekufeni kubulale umongameli woManyano kunye nokubetha ikomkhulu le-PRA yaseNew Shanghai ukuze kukhululwe uXiaoling kuyise.
Usekunye nam? KULUNGILE. NGOKU -
Aba bakhweli bamahashe bathathu bathatha isigqibo (ngenxa yezizathu endingaziqondiyo ngokupheleleyo) ukuba usekela mongameli weManyano kunye nabezopolitiko abaSIXHENXE balandelayo abakwisikhundla sobumongameli abajongi, ngoko bayababulala. UNobhala we-Cruella De Vil-esque wezangaphakathi, u-Antonia LeVay, uba ngumongameli.
Unyana wokufa, ngendlela, ngandlela-thile ungumntwana oyonwabileyo kunye nokulungelelaniswa kakuhle, kwaye ngoku uzibiza ngokuba yiBhabhiloni, ehambahamba kunye nomhlobo wakhe osenyongweni / umfundisi weBalloon, i-robot AI ekhangeleka njengebhola lebhola.
Ngaba amadoda aphambeneyo kufanelekile ukuba abukele
Leyo yinguqulelo ebanzi yemivimbo EMpuma Ntshona, ukususela ngo-Agasti ukukhutshwa koMcibisholo wama-29, wenkqubo ecetywayo engama-60. Akuzange kubekho ixesha elingcono lokungena ebhodini, kuba amahlaya ka-Hickman, ahlala ebhideka ngombandela-ngomcimbi, ayonwatyiswa kakhulu xa enokufundwa ngokuzonwabisa.
U-Hickman usoloko efaka izihloko zakhe ngeengcamango ezininzi kunokuba zinokuqulethwe ngocoselelo kwinkupho enye enamaphepha angama-32. Waqala waqhekeza ishishini kunye Iindaba zasebusuku (2007), epapashwe ngumdali we-Image Comics. Iindaba, Isityholo esine-noir-tinged semithombo yeendaba, eyabhalwa ngu-Hickman waza wayibonisa, idibanisa i-semiotics yoyilo lwegraphic - imilo elula, imibala eqinileyo - kunye nemifanekiso yencwadi ehlekisayo. Ifundeka njengoMarshall McLuhan wawela noJim Jones ngokufefa kuka-Alex Jones.
Amajoni ayimfihlo (2009-11), yayiluchungechunge lokuqala lukaHickman oluqhubekayo kwiMarvel Comics. Ukulandelelanisa uqhanqalazo lobuntlola oluphuma ezincwadini oluhlanganiswe nguNick Fury, olubalekayo luqulathe imixholo yakudala kaHickman: amarhamncwa embubhiso, abantwana bothixo abasokola ngamandla amakhulu, ababalisi abangathembekanga, kunye nesiphithiphithi esibalisayo.
Ngowama-2009 Fantastic Four , U-Hickman wasebenzisa iinguqulelo ezizezinye zeenyani ze-Marvel's ur-super genius Reed Richards ukuphonononga ukuba ubukrelekrele kunye nokuba nengqiqo, ngaphandle kweemvakalelo kunye nokuziphatha, kubi ngendalo. Kwi Ultimate Comics: Ultimates -eyenzeka kwindalo yeMarvel enempembelelo engeyiyo yecanon, uninzi lwazo luya kuqhubeka nokwenza isiseko seMarvel's Cinematic Universe - wajika wajika uRichards waba yi-supervillain, emenza inkokeli yetekhnoloji yokwenyani yexesha elizayo. Ngomso. U-Hickman wabhala kuphela imiba yokuqala ye-12 ye Ukugqibela , kodwa ihlabathi alidala apho - iMelika eyaphukileyo, ephukile kwiindawo ezizimeleyo ezilawulwa ngamaqela ahlukeneyo axhobileyo - isandulela esicacileyo se EMpuma Ntshona.
U-Hickman uqhubekile Abaphindezeli (2013) yaqala ekuqaleni kwexesha kwaye yaqhubela phambili ngokunyukayo ukusuka apho. Ndikhuphe ibheyile emva kwemiba emihlanu, kuphela ndajikeleza emva kweminyaka emibini kamva ukuze ndikwazi ukufunda yonke i-arc kanye. (Njengoko benditshilo, le yindlela yokufunda uHickman.) Wonke umbhali wencwadi ehlekisayo osebenza nabalinganiswa abaziwayo uyagxekwa ngendlela abatenxa ngayo kwicanon esekiweyo. I-critique kunye no-Hickman, kwaye ngamanye amaxesha ilungile, kukuphindaphinda kwakhe uCaptain America, uThor, uCaptain Marvel, et al, abasathethi njengabo, kodwa njengabafundi befilosofi bokuqala kwi-ayahuasca.
Nge EMpuma Ntshona , u-Hickman ukwi-anarchic yakhe ngokupheleleyo, into yombono omkhulu. Ukungathintelwa kwiimfuno ze-IP yenkampani, yena kunye no-Nick Dragotta bakha inguqu yabo yenkohlakalo, i-dystopian yaseMelika, isitena ngezitena, ukuze ekugqibeleni bayitshabalalise. Umzobo kaDragotta ubeka izizathu zokubhabha kuka-Hickman okuthe kratya kwethiyori yentlalontle kwaye anike abalinganiswa ubunzima kunye nomzimba. Ngaphandle kwezicwangciso ze-sci-fi-western, imizobo inomgangatho ongapheliyo, okhumbuza emva kwexesha le-19 leminyaka imifanekiso yeenkuni. Oku kuvumela iingcamango ezinkulu zika-Hickman kunye ne-fortune-cookie-on-acid dialogue ukuba idada phezu kweepaneli njengomoya onzima.
Ubomi bobugcisa bukaDragotta bubalulekile kuba uHickman uyathanda ukusebenza kwiitropes . Abanye abalinganiswa ngokwenene abalinganiswa ngeemvakalelo nangeentshukumo anokuthi umfundi aziqonde. Abanye - kwaye oku kwenzeka kancinci EMpuma Ntshona , ngakumbi kunye nezopolitiko - phantse iicaricatures. Uyayazi yonke into ekufuneka uyazi malunga nokuba luhlobo luni lwenkokeli uMongameli uLeVay ngokujonga nje ukukhala kwakhe kwinqwelomoya yakhe. Oku kuvakala ngabom. U-Hickman kunye noDragotta ngokucacileyo bayakonwabela ukudlala nge-semiotics esekiweyo yefom.
Ipolitiki ye EMpuma Ntshona zinika umdla, ukuba dour kwaye rhoqo paranoid. I-PRA ka-Mao, umzekelo, i-analogue encinci ye-atom yase-China, yenza iyelenqe lokulwa imfazwe kwiManyano ngokubiza amatyala, alawulwa ngabantu besithathu, ukuze abhubhise uManyano. UBukumkani baseNew Orleans butyebile kwioyile, kwaye inkosana yesithsaba, uJohn Freeman I, uphatha iManyano ngendlela umtyhali anokuphatha ngayo ikhoboka.
Yimbonakaliso yenkcubeko yethu yanamhlanje, ngaphezu kwayo nantoni na, kunye nendlela esahlulelene ngayo, utshilo Dragotta ye EMpuma Ntshona ngo-2013. Nokuba incwadi eneneni inayo nantoni na ebambekayo enokuyithetha malunga nehlabathi lethu eliya likhula ngokwahlukeneyo, kumnandi ukuhamba kunye nokukhwela. Nokuba awuzazi ukuba uphi.
kwenzeke ntoni ku john travolta
Uyilo lwango-2018 nfl mbumbulu
isiqendu 10 se-atlanta fx
Anita hill movie hbo
nba uyilo lweenqanaba 2019
Udidi lweencwadi zikaHarry potter